Maitiro Ekutsvaga Mafonti neAdobe Capture » Martech Zone
Chipiri, May 5, 2020 Chipiri, May 5, 2020 Douglas Karr
Kana iwe wakamboramba wakabatirira kushanda pane chirongwa apo mutengi aida mamwe magirafu kana chibvumirano, asi aisaziva mafonti avanoshandisa - zvinogona kunge zvichityisa. Kana, kana iwe uchida font iyo iwe yaunowana kunze kwenyika uye unoshuvira kuishandisa… rombo rakanaka pakuzvinzwisisa.
Mafonti Ekuzivisa Maforamu
Kudzoka muzuva… semakore gumi apfuura, waifanira kudaro Upload mufananidzo kuforamu uko vashandisi vefonti vaizoziva font. Vanhu ava vanoshamisa. Dzimwe nguva ndaiisa pikicha uye ndopindurwa mumaminetsi Yakanga yakapenga - nguva dzose yakarurama!
Kune angangoita 30 hunhu hwe typography, saka nemakumi ezviuru emafonti kunze uko - kuratidza nuances yefonti kunogona kunge kwakaomarara. Ndatenda kunaka kweInternet uye komputa simba, zvakadaro.
Isu ikozvino tine maturusi akasiyana anoshandisa OCR (optical hunhu kuzivikanwa) kutora iyo font uye woienzanisa nemazivikanwa dhatabhesi emafaira pawebhu. Kune mashoma emasevhisi aya:
Chii Chiri Fonti
Kana iwe uri Adobe Creative Cloud mushandisi, Adobe ine chinoshamisa chimiro mukati mayo Adobe Capture application inoisa font kuzivikanwa (kana yakafanana font kusarudzwa) uchishandisa machine learning uye chakagadzirwa njere (AI) muchanza cheruoko rwako kuburikidza nefoni yako. Inodaidzwa Tora Capture.
Adobe Capture inoita kuti iwe ushandise nharembozha yako se vector inoshandura kushandura mafoto kuita misoro yeruvara, mapatani, mhando, zvishandiso, mabrashi, uye maumbirwo Wobva waunza izvo zvinhu mune yako yaunofarira desktop uye nharembozha - kusanganisira Adobe Photoshop, Illustrator, Dimension, XD, uye Photoshop Sketch - kuti ushandise mune ako ese ekugadzira mapurojekiti.
Kuti ushandise Type Capture, ingo tora pikicha yefonti uye Capture inoshandisa Adobe Sensei tekinoroji kuziva maumbirwo uye kuratidza akafanana mafonti Sevha ivo sehunhu masitaira ekushandisa mu Photoshop, InDesign, Illustrator, kana XD.
Adobe Capture inopa zvimwe zvekuwedzera izvo zvinonyanya kushamisa pamwe nekuzivikanwa kwemafonti:
Materials - Gadzira chaiyo PBR zvishandiso uye zvigadzirwa kubva kune chero chifananidzo pane yako nhare mbozha, wozvishandisa kune ako 3D zvinhu muDimension.
Brushes - Gadzira yemhando yepamusoro mabhurashi mumhando dzakasiyana, uye uashandise kupenda muAnimate, Dreamweaver, Photoshop, kana Photoshop Sketch.
Patterns - Gadzira mapatani ejometri munguva chaiyo neCapture presets, wobva watumira mapatani ako kuPhotohop kana Illustrator kunatsa uye kushandisa sekuzadza.
Maumbirwo - Kubva pamaumbirwo akadhirowewa nemaoko kuenda kumifananidzo yepamusoro-musiyano, unogona kushandura chero chifananidzo kuve yakachena veti chimiro kuti ushandise mune dzakasiyana siyana dzeCreative Cloud maapp.
mavara - Tora uye gadziridza madingindira eruvara uye uashandure iwo mapeti emhando yekushandisa mune angangoita chero Anogadzira Cloud gore.
Dhawunirodha Adobe Capture yeIOS Dhawunirodha Adobe Capture yeApple
Tags: adobe kubatwakuitafont forumfont squirrelmaitiro ekuziva fontZiva fonttypographyvector inoshandurandeipi font iyi